३५ वाटमा चल्ने ग्रीन कम्प्‍युटर नेपालमै बन्यो, तर सरोकारवाला बेखबर किन ? – आइसिटी खबर:सूचना सञ्चार तथा प्रविधि खबर ICT Khabar.com : No.1 Tech INFO ICT News Site
Home / आइसिटी नेपाल / ३५ वाटमा चल्ने ग्रीन कम्प्‍युटर नेपालमै बन्यो, तर सरोकारवाला बेखबर किन ?
३५ वाटमा चल्ने ग्रीन कम्प्‍युटर नेपालमै बन्यो, तर सरोकारवाला बेखबर किन ?
ICT Khabar/आइसिटी खबर August 19, 2018	आइसिटी नेपाल, आइसिटी न्युज/टेक अपडेट, आइसिटी रिपोर्ट, समाज खबर Leaveacomment 1,608 Views
मुनि बहादुर शाक्य विश्वले चिनेका कम्प्युटर वैज्ञानिक तर विडम्वना नेपाल सरकारले आजसम्म पनि उनलाई चिन्न सकेको छैन । उनका आविष्कारहरु हिजोका पुस्ताका लागि पनि ठीक थिए र आजका पुस्ताका लागि पनि । सन् १९७९ मा पहिलो माइक्रो कम्प्युटर नेपालमै बनाएका शाक्यले नेपाल र नेपालीका लागि एकपछि अर्को कम्प्युटरका आविष्कारहरु गर्दै गए । देवनागरी कम्प्युटर, सुपर कम्प्युटर र ग्रीन कम्प्युटर उनका उत्कृष्ट प्रविधि आविष्कारहरु हुन् । जुन नेपाल र नेपालका लगि अति उपयोगी थिए ।
३५ वाट विद्युत क्षमतामा चल्ने कम्प्युटरमा ४ जीबी र्याम र १ टेराबाइटसम्म क्षमताको हार्डडिस्क रहेकोले ग्रीन प्रविधिको कम्प्युटर उर्जा खपतको उत्तम विकल्प सक्ने शाक्यको दावी छ ।
ग्रीन कम्प्‍युटर भविष्‍यको अति उपयोगी प्रविधि
नानो टेक्‍नोलोजीमा आधारित भएर बनेको भएर यो ग्रीन कम्प्युटर पछि सबैको भविष्‍य हो। यसले धेरै मात्रामा मानिसको आवश्‍यकताहरु पूरा गर्नेछ। किनकी यसले नानो टेक्नोलोजी ‘एडप्ट’ गरेको छ। धेरै भन्दा धेरै कम पावरमा कम्‍प्‍युटर चलाउन पाउनु नै भविष्‍यमा एउटा ठूलो खोजीको विषय हुनेछ।
विश्‍वमा अहिले नानो टेक्‍नोलोजीमा आधारित रहेर धेरै प्रकारका प्रविधिको विकास र विस्तार भइसकेका छन् खास गरी विकसित देशहरुमा। आरटीडिजम, रास भेरीपाइ, विगर बन भन्‍ने कम्पनीहरुले नानो टेक्‍नोलोजी सदुपयोग गरिरहेका छन्।किनकी यो ५ वाटमै सजिलै चल्छ।
मैले पनि ५ वाटको पावरबाट चल्‍ने प्रोग्रामहरु,रोबोट पनि बनाए। जसमा पावर कम र प्रोसेसिङ पावर बढी हुँदै जाने हुन्छ। सानो सानो पावरमा धेरै प्रोसेसिङको मेसनहरु चल्‍ने विश्‍व बजारमा माग आइसकेको छ। अझ अहिले त ‘पिट फ्लोप’को विकास भइसक्‍यो। जुन सुपर कम्प्‍युटर एउटा सानो टावरमा बन्‍ने भइसक्‍यो अब। अब मेगावाट लाग्‍ने ठाउँमा किलोवाटमै चल्‍ने भइसक्‍यो टेक्नोलोजीका कारणले।
अब मेरो पनि उद्देश्‍य अब सुपर कम्‍प्‍युटर नानो टेक्‍नोलोजीमा बनाउने छ। अहिले अमेरिकाले २ सय पेटा फ्लोप, चीनले २५ पेटाफ्लोपको सुपर कम्प्‍युटर निर्माण गरिसकेका छन्। तर हामीले त्‍यत्रो ठूलो नभए पनि कम्तिमा एउटा सुपर कम्प्युटर बनाउन सके धेरै राहत हुन्छ।
उनको अविष्कारलाई चीन, जापान र अन्य थुप्रै देशका सञ्चारमाध्यमले यो खबर प्रमुखताका साथ प्रकाशन–प्रसारण गरे पनि नेपालमा उनको आविष्कार म्युजियमको रुपमा बेखबर बनिरहेको छ ।
को हुन त मुनि शाक्य ?
आइबीएमभन्दा २ वर्ष पहिले नेपालमा नेपालीले नै माइक्रो कम्प्युटर बनाएका कम्प्युटर वैज्ञानिक मुनि शाक्यले ३५ वाटमा चल्ने ग्रीन कम्प्युटर बनाएर सफल प्रयोग गरिसकेका छन् । राज्यले लगानी गरिदिने हो भने नमुनामुलक आइटी पार्क, कम्प्युटर उत्पादन केन्द्र, टेलिमेडिसिन, विज्ञान प्रविधिको रिसर्च एण्ड डेभलपमेन्टमा आफुले २ वर्षमा नै सम्पन्न गरिदिने प्रतिबद्धता कम्प्युटर वैज्ञानिक मुनि शाक्यले गरेका छन् भने राज्यले पहिचान दिए जीवनको अन्तिम समयसम्म निस्वार्थ भएर विज्ञान तथा सूचना प्रविधिमा लाग्ने दृढ इच्छा शक्ति शाक्यको छ ।
विगत ४० वर्षको इतिहास बोकेको हाइटेक पायोनियर कम्प्युटर उत्पादन केन्द्रका वैज्ञानिक एवं कम्प्युटर विज्ञ मुनि बहादुर शाक्य जो आज पनि नेपालमा विज्ञान तथा प्रविधिको खोज अनुसन्धान, आविष्कार र प्रयोगमा उत्तिकै खटिरहेका छन् । शाक्यले सन् १९७९ मा आइबिएम कम्पनीको सोचभन्दा अगाडी रहेर नेपालबाटै पहिलो माइक्रो कम्प्युटर बनाएर नेपाल प्रविधि आविष्कार र प्रयोगमा अगाडी रहेको सन्देश विश्वभरि पु¥याए । सन् १९८३ मा देवनागरी लिपीको विकास गरेका शाक्यले वि.सं २०६३ सालमा सुपर कम्प्युटर सिष्टमको विकास नेपालमै गरे ।
शाक्यले अहिले ३५ वाट क्षमतामा चल्ने ग्रिन कम्प्युटरको विकास गरी सफल परीक्षण समेत गरिसकेका छन् । नेपालमा नै बनेको ग्रीन कम्प्युटरले जम्मा ३५ वाट बिद्युत मात्र खपत गर्दछ, जसलाई एउटा सानो सोलार प्यानलबाट पनि दैनिक १८ घण्टा भन्दा बढी चलाउन सकिन्छ । त्यतिमात्र होइन शाक्यले ५ वाटको ग्रिन कम्प्युटरको समेत आविष्कार गरिसक्नुभएको छ । जुन सरोवर ब्याकअप कम्प्युटरको लागि अति उपयोगी छ ।
कम्प्युटर वैज्ञानिक मुनिबहादुर शाक्य विश्वको लागि कुनै अपरिचित नाम होइन किनकी सन् १९७९ मा पहिलो माइक्रो कम्प्युटर बनाएर विश्वलाई चकित पारिदिएका थिए ।तिनै व्यक्ति नेपालका लागि गुमनाम बनिरहेका छन् कारण ३७ वर्ष अघिको विज्ञान तथा प्रविधिको ज्ञानभण्डार र क्षमता भएका शाक्यको कम्प्युटर आविष्कारलाई प्रयोगमा ल्याउन न त सरकार, न त सूचना प्रविधि क्षेत्रका व्यवसायी नै चासो नदेखाउदा।
आइबिएम कम्पनीभन्दा २ वर्ष पहिले माइक्रो कम्प्युटर नेपालबाटै बनाउने ब्रेन भएका शाक्यको आविष्कारहरु पछि पर्नुमा विज्ञान तथा सूचना प्रविधिमा राज्यको चासो नहुनु प्रमुख कारण हो । नत्र माइक्रो कम्प्युटर, सुपर कम्प्युटर देवनागरी कम्प्युटर र अहिले ग्रीन कम्प्युटर बनाएका शाक्यका आविष्कारहरु हिजोका पुस्ताका लागि पनि ठीक र आजको पुस्ताका लागि पनि विज्ञान प्रविधिमा ठीक हुदाहुदै पनि किन प्रयोगमा आएन र ल्याउन दिइएन त ? खोजको विषय बनेको छ अहिले ।
उमेरले ७० वसन्त पार गरिसकेका शाक्यको विज्ञान प्रविधिप्रतिको जोश र जाँगर अझैपनि किशोर अवस्थाको भन्दा कम छैन् । आजभन्दा ३७ वर्षपहिले, सन् १९७९ मा माइक्रो कम्प्युटर अविष्कार गरेका शाक्य सरकारको नजरवाट अहिले पनि टाढा छन् । सन् १९७० को दशकसम्म विश्वमै सूचना प्रविधि अर्थात् कम्प्युटरको विकास नभएको अवस्थामा शाक्यले सबैलाई आश्चर्य पार्दै माइक्रोचिप्स प्रयोग गरी कम्प्युटर निर्माण गरेका थिए त्यो पनि नेपालबाटै ।
आइबिएम जस्तो कम्पनी जसले त्यतिबेला माइक्रोकम्प्युटर बनाउने सोच गरिरहेको बेला एउटा साधारण नेपाली प्रतिभाले माइक्रो चिप्स प्रविधिमार्फत पहिलो माइक्रो कम्प्युटर नेपालबाटै बनाउन सफल भए । माइक्रो कम्प्युटर बनाएर शाक्य चुप लागेर बसेनन् । सन् १९८३ मा देवनागरी पहिलो नेपाली कम्प्युटर बनाएर सफल प्रयोग समेत गरेर देखाए । सन् २००६ मा शाक्यले सुपर कम्प्युटर बनाए ।
शाक्यले ३५ वाटबाट चल्ने ग्रिन कम्युटर बनाएर सफल प्रयोग समेत नेपालबाटै गरिसकेका छन् । यतिमात्र होइन ५ वाटबाट चल्ने ग्रिन कम्युटर समेत निर्माण गर्ने अन्तिम तयारीमा शाक्य पुगेका छन् । नेपालमा नै बनेको ग्रीन कम्प्युटरले जम्मा ३५ वाट बिद्युत मात्र खपत गर्दछ, जसलाई एउटा सानो सोलार प्यानलबाट पनि दैनिक १८ घण्टा भन्दा बढी चलाउन सकिन्छ । लोडसेडिङको मार खेपिरहेको बेला शाक्यको ग्रीन कम्युटर अहिलेको देश सुहाउदो प्रविधि भए पनि सरकारी वेवास्ता र निजी क्षेत्रको हेपाईको कारण यी अविष्कारहरु ओझेलमा परिरहेको छ ।
शाक्यको प्रतिभालाई देखेर अमेरिकाको एक कम्पनीले आजभन्दा २५ वर्ष अगाडी नै उतै बस्न आग्रह गरे पनि त्यसलाई अस्वीकार गर्दै आफ्नै देशमा विज्ञान प्रविधिमा नवीनतम काम गर्ने सोचका साथ नेपाल फर्किए र वि. सं २०४२ सालमा हाइटेक पायोनियर नामको पहिलो कम्प्युटर बनाउने कम्पनी खोलेर कम्प्युटर र यसका पार्ट्सहरूको इनोभेसनमा लागिरहे ।
करिब डेढ दर्जन हार्डवेयर र सफ्टवेयर उत्पादन गरेका शाक्यको प्रविधितर्फको अद्भूत क्षमतालाई नेपाल सरकारले साथ मात्रै दिएको भए नेपालले कम्प्युटर निर्माणको क्षेत्रमा ख्याति कमाउने थिया, शाक्य बताउछन् ।
आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि नभई नेपाल सरकारलाई चिनाउन करोडौं मूल्य बराबरको कम्प्युटर बनाउने मेशीन भित्र्याएका सो मेसीन अहिले एउटा कोठामा अलपत्र अवस्थामा थन्किएको छ । नेपालमा ४० जना भन्दा बढि इन्जिनियरहरुलाई रोजगार दिईरहेका शाक्य अहिले एक्लै बन्न पुगेका छन् ।
Previous अब सोसल मिडिया चलाउदा पनि पनि कर लाग्ने
Next प्रविधिको उपयोग बारामा भिडियो कन्फ्रेन्स मार्फत अभियुक्तको म्याद थप गरियो